24 aogositra: Md Bartelemy, Apostoly – Trinitera Malagasy
24 aogositra: Md Bartelemy, Apostoly
Fanambaràna 21, 9-14 –
Salamo 144 –
Md Joany 1, 45-51 –
I Bartelemy (Zanaky ny bainga nivadika) no heverin’ny mpandinika maro ho ilay Natanaely (fanomezan’Andriamanitra). Misterin’ny finoana ihany no fonosin’izany anarana izany raha izay no izy, satria ilay fisasaran’ny olombelona hamadika ny bainga no nampamokarin’Andriamanitra ho tonga apostoly, haneho ny voninahiny eran’ny tany rehetra, hiantso ny olombelona rehetra hizotra any amin’ilay Tempoly, manokatra ny varavarany ho an’ny lafivalon’ny tany.
Tahaka an’i Filipo, nisolo tena ny Apostoly hafa, izay nihaona tamin’i Jesoa dia tsy afaka ny hitana ho azy izany hafaliana izany ka tsindrian-daona be ihany hitantara izany amin’ny rahalahy sy ny mpiray monina, ny mpiray fiaviana sy ny olom-pantatra ary ho tonga hatrany amin’ny διέξοδος (diexodos), ny faran’ny lalana, ny faravazantany (Asa 1, 8). Tsy misy fanazavana azo omena an’izay misalasala afa-tsy ny fihaonany mivantana amin’i Jesoa: “Avia ary zahao”.
Ilay nahalala azy no neken’i Natanaely ho Zanak’Andriamanitra, Mpanjakan’Israely. Izay miaina araka ny Tenin’Andriamanitra ka mahitsy fo, tsy misy fitaka no afaka miditra amin’ny fiainana dia ny fahalalana an’i Jesoa ilay iraky ny Ray (Jn 17, 3). I Maria kosa, any amin’ny fiafaran’ny fitantarana ny Evanjely, dia nahalala an’i Jesoa rehefa nantsoiny tamin’ny anarany. Izay anaram-baovao hahalalan’Andriamanitra antsika izany, hoy i Md Joany, no fototry ny fahasambarantsika, fa anarana fantatr’izay mandray azy ihany (Apok 2, 17).
I Jesoa no fahatanterahan’ny nofin’i Jakoba, izy no ilay tohatra mampiray ny lanitra sy ny tany (Jen 28, 12), ary avy aminy no hahafahan’ny anjely miakatra sy midina: midina mandrotsaka amintsika ny fahasoavana, miakatra mampisondrotra any amin’izy Ray ny fiderana ataontsika. Izy no varavarana hahafahantsika miditra sy mivoaka (Jn 10, 9). Ilay Teny tonga nofo no famantarana manambara sy mampahazo (sakramenta) ny fiainana ao amin’Andriamanitra.
Izy Tompo anie hanamafy ao am-pontsika ny finoana nananan’i Md Bartelemy, ka hahatonga antsika Eglizy mivondrona ao amin’i Kristy, famantarana mitondra famonjena ho an’ny olombelona rehetra (vavaka fangatahana).
Alahady faha-23 mandavantaona – Taona D